Facebook ကအကောင့်ကို Create | Facebook မှာ Up ကို Sign – အပြီးအစီးလမ်းညွှန်
ကမ္ဘာ့ဖလားအနည်းငယ်အစက်အပြောက်သို့လှည့်, မည်သည့်လူမျိုးထဲကဘယ်သူ့ကိုမှလူမှုမီဒီယာအသုံးချဖို့ဆက်သွယ်နိုင်သည်, နှင့် Facebook က အဓိက web-based လူမှုကွန်ရက် application ဖြစ်ပါတယ်. အထွေထွေလူဦးရေရဲ့ သာ. တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေ Facebook ကိုအသုံးချပြီးနှင့်အချင်းချင်းဆက်သွယ်.
ဒီ post သင့်အကြောင်းပြည့်စုံမှုလုပ်ငန်းစဉ်အားငါပေးမည် Facebook ကအကောင့်ကိုဖန်တီးနည်း. ငါသည်ဤဆောင်းပါးရိုးရှင်းသောရာ၌ခန့်ထားပြီလွယ်ကူသငျသညျရိုးရှင်းစွာငါကောင်းမွန်စွာအမိန့်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံအတွက်ကဒီမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါပြီနည်းလမ်းကိုလိုက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. Facebook ကိုအသုံးပြုခြင်းသင်သည်လည်းသင်၏အဟောင်းများကိုမိတ်ဆွေများကိုရှာတှေ့နိုငျ.
ဒါကြောင့်သတိကဒီ post ကိုကြည့်ရှု Facebook ကအကောင့်ကို Create အလွယ်တကူ. စံချိန်တင်အောင်အဘို့အသငျသညျစစ်မှန်သောဖြစ်ရမည်ထားတဲ့သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒေတာထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်. သင်တစ်ဦးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တူသောကိရိယာလိုအပ်, စမတ်ဖုန်း, သင့်အကောင့်ကိုဖန်တီးရန်သို့မဟုတ် Laptop ကို.
Facebook မှာ Inc မှ. ဖြစ်သောအမေရိကန်အွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်များနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 2004 Mark Zuckerberg ဟာအားဖြင့် နှင့်သူ၏ကောလိပ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ. ဒါဟာ Menlo Park မှာရုံးချုပ်, ကယ်လီဖိုးနီးယား, U.S.
များစွာရှိပါသည် Facebook အနေဖြင့်ထောက်ပံ့ပေး features တွေ အဲဒီမှာ user ကမှ. အဓိက feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Facebook ကလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည် နှင့်မည်သူမဆို၎င်း၏အကောင့်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်. သငျသညျအရဖော်ပြထားခြင်းသည်အခြား features တွေကိုအောက်တွင်ထုတ်စစ်ဆေး.
မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့် Inbox ထဲမှာ
Facebook ကအကောင့်ကို Create: အဆင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားဖြင့်အဆင့်
ရန်ဖော်ပြထားခြင်းကိုအောက်တွင်ကောင်းစွာ-အမိန့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှာကြည့်ပါ Facebook ကအကောင့်ကို Create. ညှဉျးဆဲခြင်းနှင့်ဖြည့်စွက်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်သင့်စံချိန်ကိုဖန်ဆင်းပါလိမ့်မည်.
ပဌမ, ဒီနေရာမှာကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အခွင့်အာဏာကို Facebook မှရိုက်ထည့်ပါ: www.facebook.com
အခုတော့မှသတင်းအချက်အလက်များဖြည့်ပါ “အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးသည်” ပထမအမည်တူသော, မြိုးရိုးအမညျ, မိုဘိုင်းနံပါတ်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်လိပ်စာ, Password ကို, မှေးနေ့, နှင့်နောက်ဆုံးတွင်လိင်ကို select နှင့်အပေါ်ဖမ်းယူ “ဆိုင်းအပ်”.
ထိထိရောက်ရောက်ယခု sign up ပြုလုပ်ပြီးနောက်သင်သည်သင်၏မိုဘိုင်းနံပါတ်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်လိပ်စာအသုံးချဖို့စံချိန်နှင့် Password ကိုကို log in နိုင်ပါတယ်.
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်သင့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကို Created ပါပြီ. ဒါကြောင့်, ကြီးသုံးပြီးသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုတစ်ခိုင်ခံ့သော Password ကိုအောင်, စာလုံးအသေး, တောလည်ရာ, နှင့်အထူးဇာတ်ကောင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုခိုးယူရန်ဟက်ကာကနေကာကွယ်ပေးရန်.
အကြောင်းကိုအောက်ကဖော်ပြထားသတင်းအချက်အလက်ထုတ်စစ်ဆေး Facebook ကိုဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှု. သငျသညျခေါ်နိုင်ပါတယ် 24/7 မည်သည့်စုံစမ်းမှုအဘို့ပေးထားသောအရေအတွက်.
ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုအရေအတွက် : +1-855-326-1666
ဤဆောင်းပါးသည်သင်တို့အဘို့စုစုပေါင်းနည်းလမ်းကိုပေးသည် Facebook ကအကောင့်ကိုဖန်တီးနည်း. ငါကောင်းမွန်စွာအမိန့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထဲမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါပြီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုက်နှင့် Facebook မှာ Up ကို Sign အကောင့်ကိုထိရောက်စွာ. သင့်အကောင့်လုံခြုံစေရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Password ကိုခိုင်ခံ့စေပါ.
မည်သည့်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်များအတွက်, သင်သည်ထိုအချက်မှာဒီ post ကိုပတ်သတ်ပြီးရှိကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားခြင်းမှတ်ချက် box ကိုအောက်အတွက်မှတ်ချက်ပေး. ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ကျွန်ုပ်တို့၏ site သွားရောက်ကြည့်ရှု www-hotmail-com.email တဖြည်းဖြည်းအထောက်အကူဖြစ်စေဆောင်းပါးများကိုရဖို့.
အောက်မှာ Filed: ဆိုင်းအပ် အတူ Tagged: Facebook ကအကောင့်ကို Create, Facebook ကဖြစ်စဉ်ကို sign up ကို, facebook ကို sign up ပြုလုပ်ပါရန်ကဘယ်လို